साहित्य « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । २०७७ सालको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार केशव दाहालको उपन्यास ‘मोक्षभूमि’लाई दिइने भएको छ । खेमलाल–हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले ट्विटमार्फत् २०७७ सालको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार ‘मोक्षभूमि’
लक्ष्मीकिशोरको कथासङ्ग्रह ‘तमोरको सुसेली’ बजारमा
काठमाडाैँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कथाकार तथा शिक्षक नेता लक्ष्मीकिशोर सुबेदीको कथा सङ्ग्रह ‘तमोरको सुसेली’को लोकार्पण सम्पन भएको छ । शिक्षाविद् तथा साहित्यकार खगराज बराजको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन समारोहको अध्यक्षता चर्चित
काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)ले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा कवि शरद् पोखरेल प्रथम हुनुभएको छ । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको १०३ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा बिहीबार अमेरिकामा भर्चुअलरुपमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा
भगिराज इङ्नामलाई मदन पुरस्कार, जगदम्बा श्री थापालाई
काठमाडौँ । २०७७ सालको मदन पुरस्कारबाट ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह’ का लेखक अध्येता भगिराज इङ्नाम सम्मानित हुने भएका छन् । बिहीबार बसेको मदन पुरस्कार गुठीको साधारण सभाले ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज
साहित्यकार पौड्यालको कथाकृति ‘अपरिचित अनुहार’ सार्वजनिक
काठमाडाैँ । साहित्यकार तथा समालोचक महेश पौड्यालको कथाकृति ‘अपरिचित अनुहार’ सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शनिबार एक कार्यक्रममाझ उक्त कृति सार्वजनिक गरिएकाे हाे । कथासङ्ग्रहको समीक्षा गर्ने क्रममा
काठमाडौं । नेपाल भाषाका स्थापित उपन्यासकार मल्ल के सुन्दरको नयाँ उपन्यास ‘सेप्टेम्बर १७’ प्रकाशित भएको छ । नेपाल भाषा एकेडेमीले प्रकाशन गरेको उक्त कृतिको जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले आज कीर्तिपुरमा एक
उपन्यासकार जिएस पौडेलेको ‘पहेंलपुर’ मा बिहेको मण्डप
नेपालगन्ज । अर्को हप्ता जबर्जस्ती मेरो कपाल खुइलाइएको थियो र भिक्षुको झोली पहिराइएको थियो मलाई । तिमीलाई के बताऊँ आलोक ! मलाई कस्तो महसुस भएको थियो ? मानौँ तिमीलाई कसैले
मोतीराम भट्टको १५५ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडाैं । राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतीराम भट्टको १५५ औँ जन्मजयन्ती आज विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । विसं १९२३ भाद्र कृष्ण कुशेऔँशीका दिन जन्मेर विसं १९५३ भाद्र कृष्ण कुशेऔँशीकै दिन
रहेनन् वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्ट
काठमाडाैँ । वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्टको ८६ वर्षका उमेरमा ‘अल्जाइमर रोग’बाट निधन भएको छ । गत महिना अस्तपालमा उपचारपछि निवास कालिकास्थनमा बस्दै आउनुभएका उहाँको आज बिहान निधन भएको हो
अनेसासकाे ‘नवरत्न पुरस्कार’ द्वारा ९ जना महिला सम्मानित
बोस्टन, अमेरिका । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको नवरत्न पुरस्कार समितिले साहित्य, कला, समाजसेवा र पत्रकारिता क्षेत्रका नौजना महिलाहरूलाई नवरत्न पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ । शनिबार जुम प्रविधिमार्फत आयोजना गरिएको कार्यक्रममा
चितवन । पर्यटन ब्यवसायी तथा कवि सुमन घिमिरेले आफूले लेखेका दुई वटा कविता संग्रह पाठकलाई उपहार दिएका छन् । शनिबार सौराहामा रहेको आफ्नै होटलमा कार्यक्रमको आयोजना गरि कवि घिमिरेले नेपाली
शिखा बुक्सका २ पुस्तक बजारमा
काठमाडाैँ । शिखा बुक्स पब्लिकेशनले नयाँ २ पुस्तक बजारमा ल्याएकाे छ । जसमा एउटा अनुसन्धानात्क र अर्काे उपन्यास रहेका छन् । ३७ वर्ष अगाडि नेपाली कथा र यथार्थवाद शीर्षकमा विद्यावारधी
नारद पोखरेलको उपन्यास ‘प्रतिघात’ विमोचित
काठमाडौं । लेखक नारद पोखरेलको उपन्यास ‘प्रतिघात’ विमोचन गरिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उपन्यासको लोकार्पण गरिएको हो । नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको
संग्रहालय बनाउने भन्दै भत्काइयो महाकविको घर, चौतर्फी आलोचनापछि एकेडेमीको प्रष्टीकरण
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतीदेवीस्थित घर भत्काइएको छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले उक्त घर जीर्ण भएकाले भत्काएर पुनः सोही शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने बताएको छ । यसअघि ‘कविकुञ्ज’ भनिँदै
पोखरेली कान्छाको ‘हाफ जिन्दगी’
काठमाडौं । सरकारका लेखा अधिकृत दिनेश लम्सालको ‘हाफ जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ । यस अघि फुटकर लेख रचना लेख्दै आएका उनको संस्मरणात्मक कृति ‘हाफ जिन्दगी’ बिहीबार लोकार्पण गरिएको हो ।
दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासुमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी हुँदै
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७५० ग्राम सुनसहित १५ जना पक्राउ